Ukufundisa nge-CAD / GIS-iGeofumadas
Amacandelo, izifundo okanye iincwadi zezicelo ze-CAD / GIS
Eli nqaku lithetha ngemigca ye-contour - bebodwa -, iintlobo zabo ezahlukeneyo, ukusetyenziswa kwiinkalo ezahlukeneyo kwaye ziya kunceda abafundi bafumane ulwazi ngakumbi ngabo.
Ukuthatha ikhosi ye-QGIS ngokuqinisekileyo kukwinjongo yabaninzi kulo nyaka. Kwiinkqubo zemithombo evulekileyo, i-QGIS iye yaba sisisombululo kwezona mfuno zinkulu, zombini ziinkampani zabucala kunye nemibutho karhulumente. Ke, nokuba uyayiqonda iArcGIS okanye esinye isixhobo, faka kwiphepha lakho lokusebenzela ...
Kunyaka ophelileyo ndikwazile ukungqina ukuba umhlobo wam u "Filiblu" kwafuneka ayibeke bucala inkqubo yakhe yeVisual Basic for Applications (VBA) awayeziva ekhululekile kuyo, kwaye wasonga imikhono yakhe yokufunda i-Python kwasekuqaleni, ukwenza uhlengahlengiso lwe-plugin "HLALA UMASIPALA" kwiQGIS. Sisicelo ebesisele ...
Olu luxwebhu olucebisayo olufumaneka ngeSpanish, olunomxholo obaluleke kakhulu, ngokwembali nangokobuchwephesha, ngokubhekisele kulawulo lwemifanekiso kuqeqesho olunxulumene nesayensi yomhlaba kunye neenkqubo zolwazi lwendawo. Uninzi lomxholo unee-hyperlink kumaphepha apho kukho umxholo wokudibana. I…
ArcGIS-ESRI, Ukufundisa i-CAD / GIS, Okufumaneka, Geospatial - GIS